15 Barnaamijyada Shukaansiga Cougar ee ugu Fiican 2022 | Soo hel shimbir Jaceyl oo Qaangaar ah
Bogga ugu weyn 10 Barnaamijyada Shukaansiga Bisexual ee Bilaashka ah 2022
Sawirka laga helay pixabay
Weligaa ma ka mid noqotay dadka meel uun fadhiistay iyagoo ka fikiraya nolosha shukaansiga? Weligaa miyaad la yaabtay sidaad dareemi lahayd haddii aad qof kula xiriirto internetka adoo adeegsanaya app shukaansi? Ka warran haddii aad hesho qof aad fadhiisan karto oo aad la hadli karto saacado?
In kasta oo aysan jirin barnaamijyo shukaansi oo lab-iyo-dheddig ah oo buuxa, haddana tiro aad u wanaagsan oo meelahan ah ayaa shardi u sameeyay labada jinsi inay is-qoraan. Maqaalkan, waxaan ku qori doonnaa barnaamijyada shukaansiga lab iyo dheddig ee bilaashka ah ee ugu fiican.
Xiriirrada caafimaadka qabaa waxay udub dhexaad u yihiin ku noolaanshaha nolol togan oo wax soo saar leh. Samee dhaqaaqaas koowaad hadda!
Barnaamijyada Shukaansiga Bisexual ee Bilaashka ah
Wali ma jiraan barnaamijyo shukaansi bisexual oo xalaal ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli kartaa tiro ilaah ah oo bisexuals ah oo ku saabsan barnaamijyadan shukaansiga bilaashka ah ee caanka ah.
Waxaa la heli karaa macruufka iyo Android
OkCupid waa u bilaash inuu ku biiro. Markaad isdiiwaangelinayso waxaad dooran kartaa jihayn kasta oo aad rabto: toos, khaniis, lab iyo dheddig, lesbian, queer, asexual, su'aal, jinsi, isku jinsi, iyo sapiosexual (ama soo jiidashada sirdoonka). Haddii aad raadineyso wax ka badan isku xir-kaliya waxaad dooneysaa inaad soo dejiso barnaamijkan hadda. Is -qoristu waxay qaadataa laba daqiiqo. Waxaad kala soo degsan kartaa OkCupid macruufka iyo Android. Waxay soo dhaweynaysaa rag iyo dumarba.
Guji si aad u bilowdo
Iyada oo in ka badan 26 milyan oo ciyaarood lagu sameeyo Tinder maalin kasta, looma baahna in la isweydiiyo sababta Tinder uu ugu soo baxay mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya Goobaha shukaansi. Tinder waa lacag la'aan waxayna qaadataa dhowr ilbiriqsi in la dhiso. Waxay ka duwan tahay barnaamijyo kale oo badan oo shukaansi ah oo kaa dhigaya inaad dareento inaad shaqo codsanayso.
Si aad iskaga diiwaangeliso Tinder ma haysatid inaad buuxiso foomam ama ma ka jawaabtay 100 su'aalood. Markaad dejiso, waxaad baari kartaa ragga iyo dumarka labadaba waxaadna bilaabi kartaa isku -darka. Waxa kale oo aad ugu fiican Tinder ayaa ah in qofna uusan farriin kuu soo diri karin haddii aadan dooran inaad si toos ah ugu dul mariso boggooda iyo dabcan -adigaa iska leh.
Isku qor Tinder
Barnaamijkan waxaa dhistay haweenka LGBTQ adiga uun. Kani waa app -ka shukaansiga lab iyo dheddig ee ugu wanaagsan agagaarka. Waa hab fiican oo lagu barto naag kasta oo lesbian iyo bisexual ah oo aad waligaa rabtay inaad la kulanto. App -kan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad adigu ahaato adigoon cidna ku xukumin.
HER waa wax ka badan app shukaansi. Waa meel ay haweenka kale ee LGBTQ oo ka kala socda dhammaan qaybaha nolosha ay u yimaadaan si ay u noqdaan kuwa xun ee ay rabaan inay noqdaan. Sidoo kale waa goob aad ku yeelan karto saaxiibo cusub. HER waa 100% bilaash oo aan lahayn xayeysiis.
Ku soo biir halkan
ARAG SIDOO KALE: 10 Barnaamijyada Shukaansiga Furry ee ugu Fiican 2022 | Ku raaxayso Jaceylkaaga
BiCupid waxaa loogu talagalay dadka lab iyo dheddig-labood ah iyo kuwa laba-xiiseeya. Boggani wuxuu kaa caawinayaa rabitaankaaga qotodheer inuu nolosha soo galo. BiCupid waa goobta shukaansiga ee ugu horreysa uguna weyn adduunka oo si gaar ah u haleesha dadka labada jinsiba leh, keli-xiisaha leh, iyo labada lamaane. Waxaa jira in ka badan 960,100 xubnood oo laba jinsi ah oo raadinaya inay kulmaan oo ciyaaraan.
Ku biir bilaash
FindHrr waa meesha ay isugu imaan karaan dumarka lesbians -ka ah, kuwa qaangaarka ah iyo kuwa labada jinsiba isugu jira si ay isku bartaan. Waa app isku keena gabdhaha khaniisiinta ah goobta iyo banaankaba. Akhrinta maqaallada iyo helitaanka meelaha u dhow si aad ula kulanto waxaad si fudud u heli doontaa wehelkaaga ugu habboon. Waxaad kaloo ku baari kartaa da'da iyo xiriirka xiriirka.
FindHrr waa u bilaash inaad ku biirto. Riix si aad u bilowdo.
Waxaa laga heli karaa IOS iyo Android
Feeld waa goob shukaansiga onlaynka ah oo qof walba daacad u noqdo. Waa goob jinsi-ku-habboon oo bini'aadamku ka baadhaan shukaansiga ka baxsan xeerarka oo ay la xiriiriyaan qof galmadooda.
Feeld waxaa aasaasay Dimo ​​iyo Ana kuwaas oo go’aansaday inay kala tagaan kadib markii ay wada joogeen muddo laba sano ah markii Ana si aan dhib lahayn u qiratay inay sidoo kale dareen u qabtay haweeney.
Akhri ALSO: 15 Barnaamijyada Shukaansiga Cougar ee ugu Fiican 2022 | Soo hel shimbir Jaceyl oo Qaangaar ah
Ku xiga liiskayaga barnaamijyada shukaansiga labada jinsi waa Hornet. Hornet wuxuu kuu sahlayaa inaad hesho waxaad raadineyso. App -kan, waxaad ka heli doontaa rag kulul, jinsi ah, iyo ragga xiisaha leh oo leh hal guji. Hornet waa bilaash waana fududahay in la isticmaalo. Eeg sawirro badan oo rag ah oo adiga kugu habboon. Jooji waqtiga aad ku lumineysid barnaamijyada kale ee kaa qaalisan. La kulan wiilka dariska la ah hal guji.
Hornet waa shabakadda bulshada ee khaniisiinta adduunka oo leh in ka badan 30 milyan oo isticmaaleyaal kala duwan ah, oo bixisa saldhig guri oo bulsho oo la heli karo waqti kasta, meel kasta.
Bumble waa madal isku xirnaanta - kaliya maahan kuwa raadinaya malabkooda habka Taariikhda, laakiin kuwa raadinaya saaxiibtinimo cusub Bumble BFF, ama raadinaya lataliye ganacsi oo cusub Bumble Bizz sidoo kale. Barnaamijkani wuxuu bixiyaa hab aad u wanaagsan oo lagu helo dadka ku nool aaggaaga oo laga yaabo inay keensadaan tamarta aad raadineyso!
Bumble waxaa loogu talagalay inay ka hortagto caadooyinka shukaansiga heterosexual ee gaboobay. Waxay awood u siineysaa haweenka inay sameeyaan tallaabada ugu horreysa iyagoo siinaya awood ay ku xakameeyaan wadahadalka.
Ku biir Bumble
Grindr waa mid ka mid ah barnaamijyada isku xirka bulshada ee bilaashka ah ee ugu weyn khaniisyada, bi, trans iyo dadka queer. Malaayiin isticmaaleyaal ah maalin walba, Grindr waa la qiimeyn karaa wadamada oo dhan.
Grindr, waxaan ka abuurnay meel nabdoon oo aad ka ogaan karto, ku socon karto, oo aad eber cag uga fogaan karto adduunka qumman ee kugu xeeran. Nabdoon in la yiraahdo, Grindr waa barnaamij shukaansi oo laba jinsi ah oo lacag la'aan ah.
Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa xubnaha inay abuuraan astaan ​​shaqsiyeed oo ay adeegsadaan booskooda GPS si ay ugu meeleeyaan cascade, halkaas oo ay ka eegi karaan astaamaha kale ee lagu kala soocay masaafada oo ay arki karaan xubnaha u dhow iyo kuwa fog iyadoo ku xiran goobaha shaandhaynta qofka. Xulashada sawirka astaanta guud ee muuqaalka shabakadda ayaa soo bandhigi doonta astaanta xubinta iyo sawirrada buuxa ee xubinta, iyo sidoo kale ikhtiyaarka lagu sheekaysto, diro “taabo,” dir sawirro, wicitaan fiidiyaha, oo la wadaag qof meel sax ah.
Ku biir Grindr
Match waa goob shukaansi ka sarraysa oo la aasaasay 1995, waxay gacan ka geysteen hormuudka warshadaha shukaansiga ee khadka tooska ah waxayna hadda adeegsanayaan 24 dal iyo dhulal waxayna martigeliyaan degellada 15 luqadood oo kala duwan. In Match, waxaad ka heli kartaa nooca xiriirka aad raadineyso haddii aad toosan tahay, khaniis tahay, bi tahay, ama trans.
At match.com, waxaad samayn kartaa astaan ​​kuu oggolaanaysa inaad naftaada ku muujiso qaybo qoraal oo kala duwan oo waliba ku soo rogi kara ugu badnaan 26 sawir boggaaga.
Ku biir match.com
Ma jiraan wax xaddidan oo aad ku samayn karto wakhtigaaga madal sax ah. Saxiix, isku dar oo la kulan!
mashable.com - Sida loo raaco barnaamijyada shukaansiga marka aad tahay laba -qof
savethestudent.org - 14 goobood iyo barnaamijyo shukaansi bilaash ah oo ugu fiican
Dib -u -eegista Match.Com 2022: Ma tahay Goobta Shukaansiga Khadka tooska ah ee ugu Fiican?
Kaararka amaahdu waxay bixiyaan waxoogaa faa'iidooyin muhiim ah, oo ay kujirto kartida lagu kasbado abaalmarino iyo helitaanka kaarka lahaanshaha lacag la'aanta ah.…
Waa maxay Maaliyadda Shirkaddu sideese u shaqeysaa? | Dulmar
Maaliyadda shirkadu waxay rabta inay sharaxdo qandaraasyada maaliyadeed iyo habdhaqanka maalgashiga dhabta ah ee ka dhasha is dhexgalka maareeyayaasha...